ဇွန် 2015 |2၏စာမျက်နှာ 18 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 » ဇွန်လ (စာမျက်နှာ 2)
နောက်ဆုံးရထုတ်ကုန်စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာ Codex (www.codexdigital.com) အတွက် Codex အစဉ်အလာယခုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဖောက်သည်ဖို့ Panasonic က VariCam 35 ကင်မရာကို Codex V-RAW Recorder ကိုပို့ခြင်းဖြစ်သည်နေဆဲဖြစ်သည်။ ငြိမ်ဝပ်-of အသုံးပြုမှုနှင့်အတူ high-performance ကိုပေါင်းစပ်ပြီး, ကို Codex V-RAW Recorder 4fps အထိမှာ 120K RAW ၏အသံဖမ်းဖွင့်ခြင်းဖြင့် Panasonic ကရဲ့ကင်မရာအသစ်ပလက်ဖောင်းရန်အရေးကြီးပါသည် compressed လုပ်မထားတဲ့ RAW ဖမ်းယူဖြည့်စွက်ခြင်း, Codex ရဲ့ဆက်ပြီး ...
အသံဖုန်းများအတွက် '' Highly မျှော်လင့် SL-6 အာဏာနှင့်ကြိုးမဲ့စနစ်အခုတော့သင်္ဘော
NOW ကအသံကိရိယာများ '' Highly မျှော်လင့် SL-6 အာဏာနှင့်ကြိုးမဲ့စနစ် 688 နှင့်ကြိုးမဲ့ receiver REEDSBURG, WI, ဇွန် 29, 2015 အကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းအသုံးအဆောင် Simplified Interconnection - အသံဖုန်းများအတွက်, အသံနှင့်ဗီဒီယိုထုတ်ကုန်ရုပ်မြင်သံကြားအဘို့, ရုပ်ရှင်နှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုအထူးကု, ယင်း၏6ရောနှော / အသံဖမ်းများအတွက် SL-688 အာဏာနှင့်ကြိုးမဲ့စနစ်အားယခုရေကြောင်းကြောင်းကြေညာဖို့ကျေနပ်သည်။ ...
Lindenwood တက္ကသိုလ်-တစ်ထင်ရှားတဲ့ 1000 နှစ်လစ်ဘရယ်အနုပညာအဖွဲ့အစည်း - HD ကိုကင်မရာအဖြည့်စတူဒီယိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကေဘယ်လ်နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ် Woodbury, နယူးယော့များအတွက်သေ့အားကစားသမားကိုဖုံးလွှမ်းရန်လေးကျစ်လစ်သိပ်သည်း Z-HD5000 ကင်မရာများ, ဇွန်လ 29, 2015 များအတွက်သုံး High-end SK ကို-HD4 ရဲ့ပါဝင်သည် စိန့်ချားလ်စ်အတွက် Hitachi HDTV ကင်မရာများအပေါ်ဆက်သွယ်ရေးသင်ရိုးညွှန်းတမ်း၏ကျောင်းနှင့် Lindenwood တက္ကသိုလ်တီဗီ (LUTV) ကေဘယ်လ်လိုင်းကိုဘဏ်ဍာအခြေစိုက် MO ကို-သိရသည်။ Lindenwood ...
QSR စနစ်များပိုမိုထိရောက်သော Reality TV ကို Productions လုပ်ငန်းကူညီမည်
ဖြစ်သော CBS အဖြစ်မှန်စီးရီး "ဒီလက်ဆွဲအိတ်တစ်လုံး" အယ်ဒီတာအဖွဲ့မှကင်မရာကိုမီဒီယာများ၏မြန်နှုန်းပေးပို့အသစ်မြန်နှုန်းမြင့် transcoder န်ထမ်း။ အဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားဘဏ်ဍာထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်အရှိဆုံးစိန်ခေါ်မှုပြဿနာများ Valencia, Calif. -One ကင်မရာမီဒီယာ၏အပြောင်းအလဲနဲ့ပါဝငျသညျ။ Productions မကြာခဏလုပ်နိုင်အယ်ဒီတာအဖွဲ့အဖွဲ့များမတိုင်မီ transcoded ခံရဖို့လိုအပျကွောငျးရိုက်ကူးနာရီများစွာအတွက်ရရှိလာတဲ့ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကင်မရာများ၏ကြီးမားသောနံပါတ်များကို employ ...
TV2 Fyn Kahuna ခလုတ်, Maverik ထိန်းချုပ်မှုနှင့် Sirius 800 router ကိုအတူ HD ကိုဝင်
ဒိန်းမတ်အများပြည်သူထုတ်လွှင့်, ဘက်စုံ, အရည်အသွေးနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်မှုဒိန်းမတ်အများပြည်သူထုတ်လွှင့်, TV2 Fyn များအတွက် Snell ကိုရွေးကောက်ပြီး HD ကိုသတင်းထုတ်လုပ်မှုသို့၎င်း၏အပြောင်းအရွေ့မောင်းကိုကူညီသစ်ကို Maverik Configure လုပ်လို့ရတဲ့ထိန်းချုပ်မှုပြားနှစ်ခုနှင့်အတူတစ် Snell Kahuna ခလုတ်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ Snell ရဲ့ထူးခြားတဲ့ Kahuna M / E ကိုနည်းပညာနှစ်ခုလုံးကိုစတူဒီယိုကနေအကျိုးအမြတ်နှင့်အတူနှစ်ဦးလွတ်လပ်သောစတူဒီယိုစစ်ဆင်ရေးကိုထောကျပံ့ဖို့တစ်ခုတည်း Mainframe အတွက်ဖွ Make ...
PBS အကောင်းဆုံး 4K မှချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့် UHD Delivery Define မှဗီဒီယိုရှင်းလင်းမှု ClearView လွန်ကဲ 4K Analyzer အသုံးပြု
Campbell, ကာလီဖိုးနီးယား - ။ ဇွန်လ 29, 2015 - ဗီဒီယိုရှင်းလင်းမှု Inc ကိုစျေးကွက်-ဦးဆောင်အသံနှင့်ဗီဒီယိုအရည်အသွေးကိုတိုင်းတာခြင်းများနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစနစ်များပံ့ပိုးပေး, ယနေ့ PBS 4K ၏အရည်အသွေးစမ်းသပ်နှင့်အတည်ပြုရန်ဖို့ ClearView လွန်ကဲ 4K ဗွီဒီယိုအရည်အသွေး Analyzer ချထားသည်ဟုကြေညာခဲ့သည် ကွဲပြားခြားနားသော encoding ကနည်းပညာတွေနှင့်အတူလုပ်ငန်းများ၌တဲ့အခါမှာဗီဒီယိုက။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်အကြံပြုဖို့ PBS ကူညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် ...
။ San Jose, ကာလီဖိုးနီးယား - ဇွန်လ 29, 2015 - Quantum ကော်ပိုရေးရှင်း (NYSE: QTM) ယနေ့အဲလက်စ်မမေ့ဘူး, မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ, အ 2015 ကို Creative သိုလှောင်ညီလာခံမှာပြောရမှာလိပ်စာကယ်နှုတ်တော်မူလိမ့်မည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။ မမေ့ဘူးမီဒီယာထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဝေအတွက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ရှုခင်းဆန်းစစ်ကြလိမ့်မည် အပြောင်းအလဲတွေအတူတက်ထားရန်ယေဘုယျ-ရည်ရွယ်ချက်, အိုင်တီ-ဗဟိုပြုသိုလှောင်မှုများပျက်ကွက်ခြင်း, နှင့် ...
သင်က Going နေလေရာရာ၌, သေချာတာပေါ့ကိုသင် SADiE ကိုယူ Make
အဘယ်မှာသင်က Going ပါသလား? ခေါင်းစဉ်တစ်နာရီကြာရေဒီယိုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် New York မှာမကြာသေးမီကရာအရပျကိုယူသော 2015 နယူးယောက်ပွဲတော်များကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးရေဒီယိုအစီအစဉ်များ Gala ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားမှာသတင်းထောက်များနှင့်တင်ဆက်သူကက်သရင်း Carr ကတစ်ဦးရွှေဆုကိုရရှိထားပြီးပါပြီ။ သင်က Going နေအဘယ်မှာရှိ BBC World Service များအတွက် Loftus Media ကထုတ်လုပ်? Loftus မီဒီယာဒါရိုက်တာဂျိုအန်းအားဖြင့်ကြံစည်ခဲ့သည် ...